Saxannada Velcro iyo Saxannada PSA
giraangiraha cut-off super waaweyn
Non-xidhka daabaca cajaladood oo isbedel deg deg ah
badhamada isbedel deg deg ah
Badar sugi lahaayeen Ceramic
waskhda irbad sii darane
1.Characters ee CA by habka Sol-gel dhigay
CA, soo saaray hab Sol-gel, waa nooc ka mid ah badar sugi lahaayeen sintered. Sidaas oo kale waxaa loo magacaabay Moon hadhuudh sugi lahaayeen. aragti crystal waa mid aad u yar, taas oo kaliya 100-500nm, oo ay tahay oo kaliya in ka yar hal boqolkiiba size crystal corundum caadi ah. Gabal yar oo 46 # hadhuudh ku jira balaayiin qayb ka crystal. Marka shiidi doona, casayd alumina dhaqanka dhisnayd korontada noqday guri iyo deactive, iyo si fudud u iman ka qalab sugi lahaayeen hoos xoog ku shiidi doona. Its nolosha adeeg gaaban. Si kastaba ha ahaatee, waayo, CA, ie Moon badar sugi lahaayeen, nidaamka oo dhan xiran sidoo kale waa in ay geedi socodka is-fiicneeyay. Inta lagu guda jiro nolosha hawsheeda, ku laayeen fiiqan cusub shiidi joogto qaaday markii passivating badar crystal wanaagsan off ka yimid qalabka shiidi hoos xoog ku shiidi doona, taas oo ka dhigaysa badar ee had iyo jeer in xaaladda af badan. Sidaas daraaddeed, qalabka hadal haynta by CA sameeyey waxaa ka mid ah band cimri dheer, awoodda is-fiicneeyay wanaagsan, hufnaan goynta sare, sidoo kale ma gubanaya workpieces.
Sababtoo ah halka ay microstructure kala duwan, CA waxay muujinaysaa farqiga on sugi lahaayeen dhaqanka badar jab. CA muujinaysaa weheliyaan dhaawac crystal jabka, halka alumina dhaqanka dhisnayd korontada muujinaysaa dhaawac jab transgranular. Sidaa darteed, qalleyf ee CA waa laba jeer ka badan in of alumina caadiga ah u dhisnayd.
CA soo saaray hab Sol-gel leeyahay Halabuurka kiimikada la mid ah iyo qalbi engegnaantooda in WFA (White dhisnayd Alumina). Sababo la dhismeedkooda mikrokristallin yar uniform, qalleyf sare iyo waxqabadka jabay yar, CA la ballaaran loo isticmaali karaa shiidi qalabka adag-to-geedi socodka sida bir qalab, ahama adag, kulaylka u adkaysta steel daawaha, iwm
2.Features qalabka hadal haynta by CA dhigay
(1) badar waa mid aad u af badan, taas oo ka dhigaysa waxaa uu leeyahay awood goynta xoog leh, hufnaan darane sare. Waxaa loo isticmaali karaa goynta weyn oo qoto dheer, soo gurya feed, waajib culus oo darane oolnimada sare. Sida laga soo xigtay tijaabo ah, hal quudinta habka ay gaari karaan 0.3mm ama in ka badan, heerka saarista biraha waa ka badan laba jeer giraangiraha darane corundum caadi ah.
(2) qalleyf Good, abrasion yar, oo giraangirihiina way shiidi leh qaab haynta wanaagsan. Waayo, darane sax iyo foomka ku shiidi, saxnimada sare cabbir iyo muuqaalka size joogta ah si fudud loo helay karo.
(3) cimri dherer High iyo nolol dheer. Waxa ay gaari karaan 5 ilaa 10 jeer giraangiraha darane corundum caadi ah. Inta jeer bedelka Low waxa uu yarayn karaa waqti kaabayaal processing oo ka maqnaa, taas oo ka dhigaysa waxaa sahla isticmaalka mashiinka si toos ah gacanta ku tirsi, ogaaday wax soo saarka si toos ah.
(4) qaab is-fiicneeyay Good, ma urka. Waxaa ku hayn karaa qaab darane joogto ah, yareeyo saxo (kaliya oo ku saabsan 1/3 giringirihii caadi corundum darane) iyo kor u qaadista heerka wax soo saarka.
(5) In shiidi waxqabadka, CA giraangiraha shiidi fog ka khayr badan giraangiraha darane corundum caadi ah. Qiimo, CA aad uga yar tahay CBN iyo dheemman abrasives, halka ay darantahay ingeega, ay la mid tahay in alumina dhisnayd caadi ah, taas oo ka dhigaysa ma u baahan tahay qalab darane gaar ah iyo qalabka saxo. Sidaas waxa uu leeyahay maya shuruudaha gaarka ah ee ku shiidi qalab iyo jirin dhibaatooyin cusboonaysiintoodii marka la barbar dhigo CBN iyo abrasives diamond. Waxa kale oo ay leedahay ma jiro shuruudo gaar ah ku shiidi dheecaanka. Sidaas daraaddeed, waa ay fududahay in faafin isticmaalo waxaa ka mid ah.
Qaab dhismeedka 1.Chemical (qiimaha caadiga ah):
2. Index Jirka:
cufnaanta (g / cm3) Ball qalleyf dersey Crystal Size
3,90 65.6% 0.15μm
Previous: giraangiraha goynta sax
Blue Midho sugi lahaayeen Ceramic
ki Moon sugi lahaayeen Midho
White Midho sugi lahaayeen Ceramic
Brown dhisnayd Alumina (A)
White dhisnayd alumina (WA)